ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ ၈ အတှကျ ခြာလီနီကိုလပျဈ ( Sky Sports ) ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြမြား - SPORTS MYANMAR
ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ ၈ အတှကျ ခြာလီနီကိုလပျဈ ( Sky Sports ) ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြမြား
ယခု အပတျ မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ ၈ ကို ယှဉျပွိုငျ ကစား ကွတော့ မှာ ပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။ အဆငျ့ ၁ နရော မှာ လီဗာပူး က ၁၀၀% နိုငျပှဲ နဲ့ ဆကျလကျ ဦးဆောငျ နသေလို မနျခကျြ စတာ စီးတီး ကလညျး ၂ မှတျ အကှာ ကနေ လိုကျလံ ဖိအား ပေးနေ ဆဲ ဖွဈ ပါတယျ ။ ယခု အပတျ မှာ အသငျးကွီးခငျြး ထိပျတိုကျ တှဆေုံ့မှု မရှိ ပမေယျ့ အကြိတျ အနယျ ပှဲစဉျ တှေ ရှိ နဆေဲ ဖွဈတာမို့ ပရိသတျတှေ ကို ဆှဲဆောငျ နဦေးမှာ အသအေခြာ ပါပဲ ။
ဒါကွောငျ့ ယခု အပတျ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျတှေ အတှကျ Sky Sports ရဲ့ ဘောလုံး ကြှမျးကငျြ သုံးသပျသူ ခြာလီ နီကိုလပျဈ ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြတှေ ကို ဖျောပွ ပေးလိုကျ ရ ပါတယျ . . .
၁ ။ ဘရိုကျတနျ – စပါး
ဆောကျသမျတနျ ကို ၁၀ ယောကျတညျး နဲ့ ရလဒျ ကောငျးခဲ့တဲ့ စပါး ဟာ ဘိုငျယနျ နဲ့ အတှမှေ့ာ ပုံပကျြ ပနျးပကျြ ဖွဈလှနျး ခဲ့ ပါတယျ ။ အခု ဘရိုကျတနျက ဆီးကွို နပေါပွီ ။ လီယနျဒို ထရော့ဆတျ သာ ကွံ့ခိုငျမှု ပွညျ့ နမေယျ ဆိုရငျ စပါး တို့ ခကျခဲ ဦးမှာပါ ။ ဘရိုကျတနျ နညျးပွ ဂရဟေမျ ပျေါတာ အတှကျ တော့ အသငျးကို အခွပွေု တညျဆောကျဖို့ အခြိနျ ယူ ရဦးမှာပါ ။ ဒါပမေယျ့ စပါး ကို အခုလို အခြိနျမှာ ရငျဆိုငျ ရတာ ဟာ သူတို့ အတှကျ အခှငျ့ ကောငျးပါတယျ ။ ဒါကို အိမျကှငျး မှာ အမိ အရ အသုံးခြ နိုငျမယျ လို့ ထငျ ပါတယျ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – ဘရိုကျတနျ ၁ – ၁ စပါး
၂ ။ ဆောကျသမျတနျ – ခြဲလျဆီး
ဆောကျသမျတနျ အတှကျ တကယျ ခကျခဲတဲ့ စမျးသပျမှု တဈခု ဖွဈမှာ သခြော ပါတယျ ။ လမျးပတျ လကျအောကျ မှာ အဘေရာဟမျ ၊ မောငျ့ တို့လို လူငယျလေးတှေ တောကျပ နကွေပွီး အင်ျဂလနျ လကျရှေးစငျ ကိုပငျ တကျလှမျး နိုငျခဲ့ ကွပါပွီ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီရာသီ မှာတော့ ခြဲလျဆီး ကို အမြားကွီး မြှျောလငျ့ ထားလို့ မရနိုငျ ပါဘူး ။ အနိမျ့ အမွငျ့ အတကျ အကြ တှေ ကို သူတို့ ကွုံတှေ့ ရဦး မှာပါ ။ ဒီပှဲ က တော့ သူတို့ အတှကျ လညျး ခကျခဲ မယျ့ ပှဲ ဖွဈမှာ အသအေခြာ ပါပဲ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – ဆောကျသမျတနျ ၁ – ၁ ခြဲလျဆီး
၃ ။ နယူးကာဆယျ – မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ
နယူးကာဆယျ ဟာ အိမျကှငျး ခွစှေမျး မညံ့ပါဘူး ။ ယူနိုကျတကျ ကလညျး တျောတျောလေး ကို ကြ နပေါတယျ ။ ရ ပှဲ မှာ ၂ ပှဲ ဘဲ နိုငျပွီး အဆငျ့ ၁၀ အထိ ရောကျ နပေါတယျ ။ ဆိုးရှား အတှကျ ဒီပှဲ ဟာ အရမျး ကို အရေးကွီး ပွီး တောငျးဆိုမှု တှေ မွငျ့မား နမှောပါ ။ ဒါပမေယျ့ လူငယျတှေ နဲ့ စီနိယာ တှေ အခြိုးကြ မပေါငျးစပျ နိုငျသေးတဲ့ အသငျး ဆီကနေ ဘာတှေ မြှျောလငျ့ လို့ ရနိုငျ မှာလဲ ။ နယူးကာဆယျ ဟာ စပါး ကို တိတျဆိတျ စခေဲ့ပွီး ပါပွီ ။ အခု မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ အလှညျ့ ပါပဲ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – နယူးကာဆယျ ၂ – ၁ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ
၄ ။ လီဗာပူး – လကျစတာစီးတီး
ထိပျဆုံး ၆ သငျး ရဲ့ ဥရောပ ၀ငျခှငျ့ ကို လုယူမယျ့ လကျစတာ အတှကျ ဒီပှဲ ဟာ တကယျကို ကွီးမားတဲ့ စမျးသပျမှု ဖွဈနေ မှာ အမှနျ ပါပဲ ။ သူတို့ စပါး ကို အနိုငျ ယူ ခဲ့သလို မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ နဲ့ ပှဲ တုနျး ကလညျး အဆုံးသတျ မသခြော မှု ၊ ကံခမှေု တှေ ကွောငျ့သာ အရေးနိမျ့ ခဲ့ရတာပါ ။ အခု လီဗာပူး ရဲ့ ခံစဈ က မနှဈတုနျးက လို မဟုတျ ပါဘူး ။ ဒါကို ရျောဂြာ အနနေဲ့ အခှငျ့ ကောငျး ယူနိုငျ ဖို့ လိုပါတယျ ။
လီဗာပူး တိုကျစဈ က ထကျမွကျ သလို လကျစတာ တိုကျစဈ ကလညျး လီဗာပူး ခံစဈ ကို ဒုက်ခ ပေးနိုငျ ပါတယျ ။ လကျစတာ ဂိုးရမှာ သခြော သလောကျ ပါပဲ ။ တကယျလို့ လီဗာပူး က သာ ဒီဂိုး အရေ အတှကျ ကိုကြျောအောငျ မသှငျး နိုငျဘူး ဆိုရငျ အိမျကှငျး မှာ သရေ ကြ ကောငျး ကြ သှားနိုငျ ပါတယျ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – လီဗာပူး ၂ – ၂ လကျစတာ စီးတီး
၅ ။ မနျခကျြစတာ စီးတီး – ၀ုဗျ
၀ုဗျ တို့ နိုးထ ခြိနျ ရောကျ ပါပွီ ။ ဒါပမေယျ့ ကံဆိုးတာက သူတို့ နိုးအထ မှာ မနျစီးတီး နဲ့ ဆုံနတော ပါပဲ ။ လကျတလော မှာ ပကျဂှာဒီိယိုလာ ရဲ့ အသငျး ကို ရပျတနျ့နိုငျ ဖို့ ဆိုတာ မဖွဈနိုငျ သလောကျ ပါပဲ ။ ယူရိုပါ လိဂျ အဝေးကှငျး ပှဲ လညျး ကစား ထားရတာ ကွောငျ့ ဒီပှဲ မှာ ၀ုဗျ အနနေဲ့ အမွငျ့ဆုံး လုပျနိုငျ တာက ဂိုးပွနျ သှငျး တာ လောကျပဲ ဖွဈလာ မှာပါ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – မနျစီးတီး ၃ – ၁ ၀ုဗျ
၆ ။ အာဆငျနယျ – ဘုနျးမောကျ
ဒီပှဲ ဟာ အာဆငျနယျ တို့ စောငျ့မြှျော နတေဲ့ ပှဲမြိုး ပါပဲ ။ ဘုနျးမောကျ ဟာ တနျပွနျ တိုကျစဈ ကစားပုံ ကောငျးတဲ့ အသငျး ဖွဈပမေယျ့ အသငျးကွီးတှေ နဲ့ ဆိုရငျ ကစားပုံ ညံ့တတျ ပါတယျ ။ အာဆငျနယျ က တော့ ခံစဈ ပိုငျး တဖွညျးဖွညျး တိုးတကျလာ မှု နဲ့ အတူ ရလဒျတှေ ဆကျတိုကျ ကောငျးလာခဲ့ ပါတယျ ။ လူငယျတှေ က လညျး ယုံကွညျမှုတှေ ပိုလာပွီး အသငျး နဲ့ ပို အံ့ဝငျ လာခဲ့ ပါတယျ ။ ဘုနျးမောကျ တိုကျစဈ က အာဆငျနယျ ကို ဂိုးသှငျးနိုငျ ပမေယျ့ အာဆငျနယျ တိုကျစဈ က ဒါထကျ ပိုပွီးသှငျး နိုငျ မှာ သခြော ပါတယျ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – အာဆငျနယျ ၃ – ၁ ဘုနျးမောကျ
အခွား ပှဲစဉျ ခနျ့မှနျးမှု ရလဒျမြား –
၇ ။ ၀ကျဈဟမျး ၃ – ၁ ပဲလစျေ့
၈ ။ နောဝှဈချြ ၁ – ၂ ဗီလာ
၉ ။ ဘနျလေ ၂ – ၁ အဲဗာတနျ
၁၀ ။ ၀ကျဖိုဒျ့ ၂ – ၁ ရှကျဖီး ယူနိုကျတကျ
ပရိသတျကွီးတို့ရဲ့ သုံးသပျခနျ့မှနျးခကျြ တှကေ ရော ဘာတှေ ဖွဈမလဲဗြာ . . .
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၈ အတွက် ချာလီနီကိုလပ်စ် ( Sky Sports ) ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ
ယခု အပတ် မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၈ ကို ယှဉ်ပြိုင် ကစား ကြတော့ မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ အဆင့် ၁ နေရာ မှာ လီဗာပူး က ၁၀၀% နိုင်ပွဲ နဲ့ ဆက်လက် ဦးဆောင် နေသလို မန်ချက် စတာ စီးတီး ကလည်း ၂ မှတ် အကွာ ကနေ လိုက်လံ ဖိအား ပေးနေ ဆဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ယခု အပတ် မှာ အသင်းကြီးချင်း ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံမှု မရှိ ပေမယ့် အကျိတ် အနယ် ပွဲစဉ် တွေ ရှိ နေဆဲ ဖြစ်တာမို့ ပရိသတ်တွေ ကို ဆွဲဆောင် နေဦးမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။
ဒါကြောင့် ယခု အပတ် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ အတွက် Sky Sports ရဲ့ ဘောလုံး ကျွမ်းကျင် သုံးသပ်သူ ချာလီ နီကိုလပ်စ် ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေ ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက် ရ ပါတယ် . . .
၁ ။ ဘရိုက်တန် – စပါး
ဆောက်သမ်တန် ကို ၁၀ ယောက်တည်း နဲ့ ရလဒ် ကောင်းခဲ့တဲ့ စပါး ဟာ ဘိုင်ယန် နဲ့ အတွေ့မှာ ပုံပျက် ပန်းပျက် ဖြစ်လွန်း ခဲ့ ပါတယ် ။ အခု ဘရိုက်တန်က ဆီးကြို နေပါပြီ ။ လီယန်ဒို ထရော့ဆတ် သာ ကြံ့ခိုင်မှု ပြည့် နေမယ် ဆိုရင် စပါး တို့ ခက်ခဲ ဦးမှာပါ ။ ဘရိုက်တန် နည်းပြ ဂရေဟမ် ပေါ်တာ အတွက် တော့ အသင်းကို အခြေပြု တည်ဆောက်ဖို့ အချိန် ယူ ရဦးမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် စပါး ကို အခုလို အချိန်မှာ ရင်ဆိုင် ရတာ ဟာ သူတို့ အတွက် အခွင့် ကောင်းပါတယ် ။ ဒါကို အိမ်ကွင်း မှာ အမိ အရ အသုံးချ နိုင်မယ် လို့ ထင် ပါတယ် ။
ခန့်မှန်းချက် – ဘရိုက်တန် ၁ – ၁ စပါး
၂ ။ ဆောက်သမ်တန် – ချဲလ်ဆီး
ဆောက်သမ်တန် အတွက် တကယ် ခက်ခဲတဲ့ စမ်းသပ်မှု တစ်ခု ဖြစ်မှာ သေချာ ပါတယ် ။ လမ်းပတ် လက်အောက် မှာ အေဘရာဟမ် ၊ မောင့် တို့လို လူငယ်လေးတွေ တောက်ပ နေကြပြီး အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် ကိုပင် တက်လှမ်း နိုင်ခဲ့ ကြပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် ဒီရာသီ မှာတော့ ချဲလ်ဆီး ကို အများကြီး မျှော်လင့် ထားလို့ မရနိုင် ပါဘူး ။ အနိမ့် အမြင့် အတက် အကျ တွေ ကို သူတို့ ကြုံတွေ့ ရဦး မှာပါ ။ ဒီပွဲ က တော့ သူတို့ အတွက် လည်း ခက်ခဲ မယ့် ပွဲ ဖြစ်မှာ အသေအချာ ပါပဲ ။
ခန့်မှန်းချက် – ဆောက်သမ်တန် ၁ – ၁ ချဲလ်ဆီး
၃ ။ နယူးကာဆယ် – မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်
နယူးကာဆယ် ဟာ အိမ်ကွင်း ခြေစွမ်း မညံ့ပါဘူး ။ ယူနိုက်တက် ကလည်း တော်တော်လေး ကို ကျ နေပါတယ် ။ ၇ ပွဲ မှာ ၂ ပွဲ ဘဲ နိုင်ပြီး အဆင့် ၁၀ အထိ ရောက် နေပါတယ် ။ ဆိုးရှား အတွက် ဒီပွဲ ဟာ အရမ်း ကို အရေးကြီး ပြီး တောင်းဆိုမှု တွေ မြင့်မား နေမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် လူငယ်တွေ နဲ့ စီနိယာ တွေ အချိုးကျ မပေါင်းစပ် နိုင်သေးတဲ့ အသင်း ဆီကနေ ဘာတွေ မျှော်လင့် လို့ ရနိုင် မှာလဲ ။ နယူးကာဆယ် ဟာ စပါး ကို တိတ်ဆိတ် စေခဲ့ပြီး ပါပြီ ။ အခု မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ အလှည့် ပါပဲ ။
ခန့်မှန်းချက် – နယူးကာဆယ် ၂ – ၁ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်
၄ ။ လီဗာပူး – လက်စတာစီးတီး
ထိပ်ဆုံး ၆ သင်း ရဲ့ ဥရောပ ၀င်ခွင့် ကို လုယူမယ့် လက်စတာ အတွက် ဒီပွဲ ဟာ တကယ်ကို ကြီးမားတဲ့ စမ်းသပ်မှု ဖြစ်နေ မှာ အမှန် ပါပဲ ။ သူတို့ စပါး ကို အနိုင် ယူ ခဲ့သလို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲ တုန်း ကလည်း အဆုံးသတ် မသေချာ မှု ၊ ကံခေမှု တွေ ကြောင့်သာ အရေးနိမ့် ခဲ့ရတာပါ ။ အခု လီဗာပူး ရဲ့ ခံစစ် က မနှစ်တုန်းက လို မဟုတ် ပါဘူး ။ ဒါကို ရော်ဂျာ အနေနဲ့ အခွင့် ကောင်း ယူနိုင် ဖို့ လိုပါတယ် ။
လီဗာပူး တိုက်စစ် က ထက်မြက် သလို လက်စတာ တိုက်စစ် ကလည်း လီဗာပူး ခံစစ် ကို ဒုက္ခ ပေးနိုင် ပါတယ် ။ လက်စတာ ဂိုးရမှာ သေချာ သလောက် ပါပဲ ။ တကယ်လို့ လီဗာပူး က သာ ဒီဂိုး အရေ အတွက် ကိုကျော်အောင် မသွင်း နိုင်ဘူး ဆိုရင် အိမ်ကွင်း မှာ သရေ ကျ ကောင်း ကျ သွားနိုင် ပါတယ် ။
ခန့်မှန်းချက် – လီဗာပူး ၂ – ၂ လက်စတာ စီးတီး
၅ ။ မန်ချက်စတာ စီးတီး – ၀ုဗ်
၀ုဗ် တို့ နိုးထ ချိန် ရောက် ပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် ကံဆိုးတာက သူတို့ နိုးအထ မှာ မန်စီးတီး နဲ့ ဆုံနေတာ ပါပဲ ။ လက်တလော မှာ ပက်ဂွာဒီိယိုလာ ရဲ့ အသင်း ကို ရပ်တန့်နိုင် ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင် သလောက် ပါပဲ ။ ယူရိုပါ လိဂ် အဝေးကွင်း ပွဲ လည်း ကစား ထားရတာ ကြောင့် ဒီပွဲ မှာ ၀ုဗ် အနေနဲ့ အမြင့်ဆုံး လုပ်နိုင် တာက ဂိုးပြန် သွင်း တာ လောက်ပဲ ဖြစ်လာ မှာပါ ။
ခန့်မှန်းချက် – မန်စီးတီး ၃ – ၁ ၀ုဗ်
၆ ။ အာဆင်နယ် – ဘုန်းမောက်
ဒီပွဲ ဟာ အာဆင်နယ် တုိ့ စောင့်မျှော် နေတဲ့ ပွဲမျိုး ပါပဲ ။ ဘုန်းမောက် ဟာ တန်ပြန် တိုက်စစ် ကစားပုံ ကောင်းတဲ့ အသင်း ဖြစ်ပေမယ့် အသင်းကြီးတွေ နဲ့ ဆိုရင် ကစားပုံ ညံ့တတ် ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် က တော့ ခံစစ် ပိုင်း တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာ မှု နဲ့ အတူ ရလဒ်တွေ ဆက်တိုက် ကောင်းလာခဲ့ ပါတယ် ။ လူငယ်တွေ က လည်း ယုံကြည်မှုတွေ ပိုလာပြီး အသင်း နဲ့ ပို အံ့ဝင် လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဘုန်းမောက် တိုက်စစ် က အာဆင်နယ် ကို ဂိုးသွင်းနိုင် ပေမယ့် အာဆင်နယ် တိုက်စစ် က ဒါထက် ပိုပြီးသွင်း နိုင် မှာ သေချာ ပါတယ် ။
ခန့်မှန်းချက် – အာဆင်နယ် ၃ – ၁ ဘုန်းမောက်
အခြား ပွဲစဉ် ခန့်မှန်းမှု ရလဒ်များ –
၇ ။ ၀က်စ်ဟမ်း ၃ – ၁ ပဲလေ့စ်
၈ ။ နောဝှစ်ခ်ျ ၁ – ၂ ဗီလာ
၉ ။ ဘန်လေ ၂ – ၁ အဲဗာတန်
၁၀ ။ ၀က်ဖိုဒ့် ၂ – ၁ ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက်
ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ သုံးသပ်ခန့်မှန်းချက် တွေက ရော ဘာတွေ ဖြစ်မလဲဗျာ . . .